Cashar ku Saabsan Ka Hortagga Waxyeelada Dabka. Diyaariye: Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Sareeye Guuto Axmed Maxamed Xasan | Gacanlibaaxnews
Cashar ku Saabsan Ka Hortagga Waxyeelada Dabka. Diyaariye: Taliyaha Ciidanka Dab-demiska Sareeye Guuto Axmed Maxamed Xasan
September 9, 2018 - Written by C M
Maallinba maallinta kasii dambeysa ayaa cilmiga dabdemintu usii casriyoobaayey asaga oo barbar socda qalabyada iyo horumarka isbedelaaya ee ay kolba wersheduhu ku talaabsanayaan. Waxaa jirta in ay wersheduhu maallin kastaba soo saaraan qalabyo kala duwan oo dab ololkooda iyo qiiqa sumeyntooduba semeyaan ay dhibaato hor leh la yimaadaan. Markaas waxaa daruuri noqotey khubarada ku takhasusey dab la dirirka iney u semeyaan qalabkii, xirfadihii iyo xeeladihii lagaga adkaan lahaa iyo demiyeyaashii lagu demin lahaa ba.
Hadaba, wexey culimadu isku hawleen oo markii dambena ayku guulesteen iney semeyaan qalab baadhis hor leh oo lagu ogaado dabku inta u yaryahay (Early Detection Of The Fire), qalabkaas oo loo yaqaano (Smoke Detector) oo afkeena loogu yaqaano (Baadhaha Qiiqa), waxaana lagu ladhey oo lagu xidhiidhiyey qalab kale oo qayliya ammaseba digniin bixiya marku qalabka qiiqu dareemo iney wax isbedel ahi yimadeen sida qiiqa oo kale oo la yidhaahdo (Fire Alarm) loogu yaqaano afkeena (Digaha Dabka).
Hadaba, qalabkan qiiqa sheega wuxuu u qaybsama laba qaybood oo mid waliba si gaar ah u shaqeeya labadubana wexey sheegaan qiiqa inta uu yaryahay oo loo yaqaano (Incipient Stage) oo afkeenana loogu yaqaano da’da (Heraab). Waxaana iyena jira qalabyo kale oo iyeguna sheega marka u dabku olol semeeyo ammaseba dhimbiilo ay bilaabmaan oo loo yaqaano (Flame Detectors).
Waxaana isla markaasna jira qalab kale oo sheega kulka oo loo yaqaano (Heat Detectors) oo iyeguna laba nooc u shaqeeya hase yeeshee isku shaqo uun qabta oo ah kul sheegid. Waxaana lagu rakibaa meelaha kushiinada, stoodhada, iyo meelaha mashiinada shaqeynaaya la dhigo oo kulkooda la doonaayo iney qiyasnadaan oo aanu sare uga kicin inta loo qiyaasey, haddiise qolkaasu kulkiisu u dhaafo intii loogu tala galey baadhahaasi wuxuu war uu u diraaya oo uu kaga shaqeysiinaaya qalabka kale ee ay isku lamaanyihiin oo ah digaaha qayla dhaanta sameeya ee afka qalaad loogu yeedho (Fire Alarm)…. La Soco Qaybaha Dambe
Waxaa hadaba loo baahanyahay in qalabkaas baadheyaasha iyo Digeyaashaba in lagu rakibo meelaha hanti fara badani ay yaaliin, dad fara badani ku noolyihiin ammaseba ka shaqeeyaan sida hudheelada, sinimooyinka, cusbitaalada, xafiisyada, bakhaarada guryaha la seexdo, bangiyada iwm.
Hadaba, waxaa suaal isweydiin leh ah qalabka an soo sheegey wadankeena malaga helaaya, farsama yaqaaniintii rakibi lahaydna ma joogaan? Jawaabtuna waa haa, qalabyadaas wadanka waa laga heli karaa, farsama yaqaaniintii rakibi lahaydna, ammaseba cilad ka saarid qaban lahaana waa la helaaya.
Ugu dambeyntiina waxaan dadweynaha talo ku siinaaya imika sidii berigii hore dalku ma ahaa, waxaanu leenahay ciidankii dabdemiska qaranka oo wax walba shicibka u sahlaaya iney ka caawiyaan waxyaabaha ayka tabanayaan dhinaca dabka iyo nabadgelyadaba (Fire & Safety) markaas waxaa loo baahanyahay intaan lagu rakibanin ammaseba kharashkooda la gelin iney la tashi la semeystaan ciidanka dabdemiska qaranka oo ayka caawin doona noocyada, tirada, halka lagu kala rakibaayo iyo tababarkoodaba, laiskana
daayo qalabyada dabdemiska ee laiska soo iibsanaayo iyega oo aaney waxba ka garaneynin, waxaana imika bilaabmi doona ciidanka dabdemisku iney hubin iyo jeegareynba ku semeyn meel kasta oo ay qalbkaasi yaalin.
Sareeye Guuto Axmed Maxamed xassan (Sawaxili).